के कर्मसँगै भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ ? जन्मचक्र, प्रारब्ध, कर्म र भाग्यको लेखाजोखा - Everest Dainik - News from Nepal
के कर्मसँगै भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ ? जन्मचक्र, प्रारब्ध, कर्म र भाग्यको लेखाजोखा
सामान्यतय भन्ने गरिन्छ, आज हामी जे जस्तो फल भोग गरिरहेका छौं ती सबै हाम्रो पूर्वजन्मको कर्मकै कारण हुन्छ । तर, यो कुरा पूर्णतय सत्य छैन । समाजमा यस्ता कुराप्रति विश्वास हुनु भनेको यसमा केही अंशमा सत्यता हुन सक्छ । तर समाजमा यस्ता धारणा प्रचलित हुन्छन् र यस्तै धारणाका कारण हिन्दू धर्मलाई भाग्यवादीहरूको धर्म मानिन्छ । यसै धारणाका कारण के समेत भन्न थालिन्छ भने, उसोभए हामीले कर्म गर्ने नै के का लागि ?
जब सबै कुरा पूर्वजन्ममै निर्धारित एवं निश्चित छन् भने किन कर्म गर्नु ? तर समाजमा यस्तो धारणा किन प्रचलित हुन्छ भने अधिकांश मानिसले कर्म सिद्धांत पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो छ आज तपाइको भाग्य? हेर्नुस् राशिफल
याे पनि पढ्नुस उपवास बसेको बेला यौन सम्बन्ध राम्रो कि नराम्रो? यस्तो छ शास्त्रमा
ट्याग्स: कर्म, धर्मशास्त्र, प्रारब्ध कर्म, भाग्य